Backpacking Tips Fa Traveling On Lamasinina | Save A Train
Home > Travel Europe > Backpacking Tips Fa Traveling On Lamasinina
Fotoana famakiana: 4 minitra(Last Nohavaozina: 17/04/2020)
Backpacking dia iray amin'ireo fomba mahafinaritra indrindra mba handeha, ary marina izany. Ny fahafahana manana ny fananany rehetra eo amin'ny lamosiny sy hopping amin'ny fiaran-dalamby mba hampiofanana sy firenena ny firenena dia tsy mampino traikefa. Koa satria izany no lasa malaza, dia nihevitra izahay hoe homena anao amin 'ny Travel ny sasanyackpacking toro-hevitra ho an'ny mandeha amin'ny fiarandalamby.
Let’s start with where we recommend you go before we give you our Backpacking toro-hevitra ho an'ny mandeha amin'ny fiarandalamby.
Trip soso-kevitra 1: London ho any Amsterdam
Duration: 23 andro
The Lineup: Roma, Viareggio (Tuscany), Venice, Vienna, Budapest, Krakow, Prague, Berlin, Amsterdam, efa nampiasaina, London
Trip Soso-kevitra 2: London ho any Istanbul
Duration: 25 andro
Route Zava-nisongadina: Eiffel Tower, Luxembourg Gardens, Lake Geneva, Nanketo Alpes eto Soisa, Neuschwanstein Castle, Toby fitanan'i Dachau, Buda Castle, mafana fandroana in Budapest, The Black Fiangonana, ny Palace amin'ny Parlemanta, Fiangonan 'ny nahaterahan'i Jesosy, Alexander Nevski fiangonana, ny Grand Bazaar, St. Sophia.
Zurich any Lausanne Lamasinina
Geneva ho any Lausanne Lamasinina
Bern an'i Lausanne Lamasinina
Lucerne ho any Lausanne Lamasinina
Ny 1 pick for backpacking torohevitra: Pack Light!
Raha ny hevitry ny lugging be loatra ny hiverina amin'ny tsy toa manintona, fa mora ny Mihoatra ny entana rehefa mahazo faly ianao momba ny diany! Voalohany, veloma amin'ny kitapo roller ary fa tsy izany maka kitapo mampientam-po manemitra manodidina ny valahanao ho fanampiana. Rehefa nampirina entana, manontania tena: 'Ve aho tena mila izany?'Raha ny valiny tsy, kady izany! Na dia tsara raha afaka mihazakazaka ka nidina ny tohatra vitsivitsy fotoana - izany no hanome anareo ny famantarana ny fomba fitantanana ianao raha mihazakazaka ianao ho tara lamasinina, ary mila mihazakazaka ny hisambotra azy!
Soso-kevitra 2: ataovy The Rail Planner App ny tsara indrindra namana.
Ity fampiharana ny fiaran-dalamby rehetra alaina fandaharam-potoana tao amin'ny finday mba afaka mahazo azy ireo ivelan'ny aterineto, ary dia zava-dehibe ho an'ny backpacking torohevitra! It’s perfect for planning your trips while you’re on the go and enjoying your time in a new, toerana any ivelany. koa, ny fampiharana mamela anao hanivana ny lalamby safidy miorina amin'ny fifandraisana mivantana ihany no, fiaran-dalamby tsy maintsy famandrihana, ary manofana amin'ny bisikileta kalesy. Marina fa tsy Manoro hevitra maka bisikileta teo amin'ny backpacking lavitra!
Dortmund ho any Frankfurt Lamasinina
Nuremberg any Frankfurt Lamasinina
Stuttgart any Frankfurt Lamasinina
Bonn any Frankfurt Lamasinina
Soso-kevitra 3: Aza afangaro ny tsitrapo amin'ny ho rava!
Ny teboka rehetra ny backpacking toro-hevitra dia ny hanana ny fahafahana mba handeha haingana, kely, ary tsy misy fikarakarana kokoa eto an-tany! Raha toa ianao ka mividy ny farany lalamby mandalo, ianao hamonjy vola, fa raha manina ny fiaran-dalamby, dia afaka manomboka mahazo pricey. Noho izany, whey ny izay tianao hatao ary hanome ny tenanao ara-drariny fe-potoana hanaovana izany. Mividy tapakila mialoha hamonjy anao vola fa dia hametra ny manovaova.
Cologne ho Nuremberg Lamasinina
Munich ho Nuremberg Lamasinina
Stuttgart ho Nuremberg Lamasinina
Dortmund ny Nuremberg Lamasinina
Soso-kevitra 4: Last backpacking Soso-kevitra – Ataovy maina ba kiraro roa akaiky manolotra
Ny tsara indrindra Travel backpacking toro-hevitra avy amin'ny zavatra niainany. Tsy misy manimba ny andro tahaka lena ba kiraro, indrindra fa raha ianao no mila mandeha lavitra. Mba hametraka fanevatevana ny ratsy, ny faharoa zavatra ratsy indrindra hitranga dia tsy ho afaka na dia mahita ny ba kiraro rehefa tena mila azy! Izany dia mifarana ao unpacking ny re-fonosana. Misy zavatra tsy misy olona te hanao! Samy tranga tsy mahafinaritra, maina aoka izany no hahatanterahanareo ny mpivady ao amin'ny paosy akaikin'ny ambony ny kitapo. toy izany, raha hitranga handeha tsara ho any izay goavana puddle, ny vahaolana dia akaiky ny tanana.
To get the best train experience when backpacking, amin'ny mahafinaritra sy tsy misy vidiny famandrihana saram, fampiasana Save A Train, ary aza adino ny pirinty ny Travel backpacking torohevitra eo anatrehanao hampiofanana ny Travel.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-backpacking-tips%2F - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#Backpacking #BackpackingTips europeantravel europetravel longtrainjourneys fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel fiaran-dalamby nankany